Shariif oo taageeray boobka kuraasta Golaha Shacabka | KEYDMEDIA ONLINE
Shariif oo taageeray boobka kuraasta Golaha Shacabka
Shariif, ayay dadka qaar ku tilmaameen inuu yahay shaqsi is-badel badan, waxaana dib loo soo xasuustay waddadii uu xilka Madaxweynaha ku helay oo ahayd inuu ka soo diga-rogtay hoggaankii Midowgii Maxaakiimta.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xisbiga Himilo Qaran, ee uu hoggaamiyo Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa si buuxda u caddeeyay mowqifkiisa ku aaddan hannaanka boobka ah ee ay ku socoto doorashada kuraasta Golaha Shacabka iyo shirka ay ku dhawaaqeen xubno ka tirsan Midowga Musharixinta.
Keydmedia Online, ayaa noqotay warbaahintii ugu horreysay ee baahisay in Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyo RW hore Xasan Cali Kheyre, ay ka hor yimaadeen tallaabada uu Mucaaradku ku doonayo hakinta boobka iyo in la qabto shir wax-galka bulshadu isugu imaanayaan, si looga hor taho dhaca kurasta ee Farmaajo masuulka ka yahay.
Ku dhawaad 12 saac kadib baahintii KON, Guddoonka Xisbiga Hilimo oo kulan la qaatay Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, ayaa caddeeyay in ay Rooble kala hadleen dardargalinta doorashada, taas oo ka dhigan in ay ka madax bannaan yihiin go’aanka ka soo baxay Musharixiinta ee ku aaddan hakinta doorashada.
“Kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii la isaga kaashan lahaa sixidda Doorashada iyo dardar gelinta doorashooyinka, waxaana la isku raacay in meel looga soo wada jeesto wax kasta oo dib u dhigi kara arrimaha doorashada taasoo saldhig u ah horusocodka Dowladnimada Soomaaliya”. Ayaa lagu yiri war ka soo baxay xaafiiska Shariif.
24 November 2021, Waraaq uu soo saaray Shariif, oo uu isaga soocay go’aannada Murashixiinta kale, ayuu ku sheegay in isaga iyo taageerayaashiisu soo dhaweynayaan bilowga doorashada Golaha shacabka ee Baarlamaanka 11aad JFS, xilli inta badan xubnaha mucaaradka ay muujinayeen walaac ku aaddan hannaanka lagu daah-furay doorashada.
12 November 2021, Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, iyo Shariif Sheekh Axmed, ayaa qaatay kulan aysan goobjoog ka ahayn xubnaha kale ee Midowga Musharixiinta, waxaana xilligaas socday yabyabka Isbaheysi cusub, [Alliance] oo lagu wiiqayay awoodda mucaaradka, waxaana arrinkas loo adeegsaday Shariif.
U jeedka kulankaas, waxaa lagu sheegay xog-siinta howlaha doorashooyinka dalka iyo ka warbixinta halka ay marayaan howlaha doorashooyinka, hayeeshee, KON, ayaa ogaatay in Rooble, uu Shariif u geeyay farriin uu uga siday horjoogayaasha maamullada oo uu shir dhacay aaladda ZOM-ka la qaatay 11 November 2021.
Billowgii bishii October, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa si weyn loogu dhaleeceeyay barasha bulshada, kadib markii uu bannaanka u soo baxay war sheegaya inuu Golaha ka codsaday in ay doortaan hoggaan kale, isla-markaana uu isagu iska casilayo xilka Guddoomiyaha Golaha Midowga Musharixinta.
Sida la rumeysan yahay , waxaa jira xiriir xooggan oo ka dhaxeeya eedeysane Fahad Yaasiin iyo Sheekh Shariif, kaas oo abuurmay kadib markii Fahad dhacdooyin hore u dhacay ka raalli galiyay Shariif billowgii bishii April, maalmo ka hor muddo kordhintii fashilanatay.
Xilligaas, Shariif, wuxuu ka baxay dalka, wuxuuna ka gaabsaday dadaalladii looga hor tagay in dalku galo gacan kali-talis, wuxuuna qaar ka mid ah Musharixiinta, si hoose ugu dacweeyay wakiillada Beesha Caalamka, isagoo ku eedeeyay in ay u bira-tumeen dagaallo laga baaqsan karay, taas oo ka dhigan inuu doonayay in Farmaajo loo oggolaado labadii sano ee sharci darrada ahayd.
Shariif, wuxuu ka mid yahay dhowr siyaasi, oo aan ka hadlin shaqo ka raacdeynii eedeysane, Fahad Yaasiin, wuxuuna si aan looga baran oo si weyn kaga duwan shirarkiisii jaraa’id ee hore uga hadlay kiiska Ikraan Tahliil Faarax, oo ku maqan gacanta Fahad Yaasiin.
Shariif oo siyaasadda soo galiyay Farmaajo, kana dhigay Ra’iisul Wasaaraha dalka iyo Khayre oo ku dhawaad afar sano u adeegayay Farmaajo, ayaa hadda wajahaya dhaleeceynta ugu badan ee bulshada caasimadda, wuxaana lagu eedeyay in ay garab mareen howshii laga sugayay ee badbaadada dalka.